Zavamaneno malagasy : Ny tantarana��ny valiha sy ny fahendrena fonosiny – fanilo
I- Ny valiha sy ny nipoirany
Anisana��ny mifamatotra akaiky amina��ny tantarana��i Madagasikara sy ny Malagasy ny valiha. Fanontaniana anisana��ny goavana indrindra sy mila itadiavam-baliny ny hoeA�: A�A�avy any ivelany sa antsika Malagasy marina ny valihaA�?A�A�. Valim-pikarohana vitsivitsy no ndeha hamaliantsika io fanontaniana io.
1- Avy any ivelany ny valiha
Mpikaroka maro no nilaza fa anisana��ireo lova avy any amina��ny Nosantara na A� Melayu-Polyneziana ny valiha. Iza moa ireto Nosantara iretoA�? Vondrona��olona avy any Sina izy ireo. Raha jerena amina��ny sarintany amina��izao fotoana izao, avy ao amina��ny faritra��i Shanghai. 5.000 taona talohana��i Jesoa Kristy, nisy fifindra-monina lehibe nataona��ireto Nosantara na Melayu-Polyneziana ireto. Anisana��ny nampiavaka ireto taranaka Melayu ireto ny fahaiza-mifehy ny fitsokana��ny rivotra sy ny ranomasina ary ny fanamboarana sambo (sambu amina��ny fiteny nosantara) vaventy. Efa nahavita sambo mahazakatra 1.000T ry zareo tamina��izany.
Nidina nanaraka ny Ranomasina Indianina sy Pasifika ry zareo tamina��izany. Anisana��ireo tany nahatongavan-dry zareo teto Madagasikara, Filipina, Indonezia, BornA�o, Viet-Nam, Malezia, sns. Nitondra ny kolontsainy sy ny fomba amam-panaony ny Nosantara fa tsy nandeha tanam-polo nandritra ireny fifindra-monina ireny. Anisana��izany ny fambolena vary, ny tandrotafo, ny lamba fitafy, ny valiha,A� ny dihy samihafa, sns.
Ho ana��ny mpikaroka ao anatina��ity sokajy ity,A� avy any amina��ny Nosantara na Melayu-polyneziana ny valiha.
2- Avy eto ihany ny valiha
Ny mpikaroka sasany indray milaza fa tsy avy any amina��ireo Nosantara ireo ny valiha fa zavamaneno efa nisy teto. Manizingizina ireto mpikaroka ireto fa efa nisy olona tany Ankaratra fony faha tany ambadika��Imanareza (fomba filazana ny vanim-potoana farana��izay ela). Efa nampiasa ny valiha ireo mponina ireo tamina��izany raha ny voalaza any anaty angano. Marihina fa ny angano akory tsy midika hoe A�A�zavatra na tantara noforomporoninaA�A�. Tsy izay velively ny tena hevitry ny angano fa karazana firaiketana zava-miafina tsy tiana ho hita mivantana sy ankarihary noho ny antony samy hafa, toy ny fananana hasina, fitandremana zava-pady sy tsy fanao,A� sns.
Ho ana��ireto mpikaroka ao anaty sokajy faharoa ireto indray, ana��ny Malagasy efa nonina teto ny valiha.
3- Ny vanim-potoana nahatongavana no samihafa
Ho ana��ireto mpikaroka momba ny tantara ireto indray, nentina��ny Nosantara na ny Melayu-polineziana ihany ny valiha fa ny vanim-potoana nahatongavana��izy ireo teto Madagasikara no samihafa. Tao ny efa tonga nialoha ka efa zary A�A�MalagasyA�A� nonina teto Madagasikara. Tao ihany koa anefa ireo vao niditra tany amina��ny taonjato faha-9 ka hatramina��ny taonjato A�A�A�A�A�faha-13. Izany hoe,A� anisana��ny miombon-kevitra amina��iretsy mpikaroka voalaza voalohany iretsy ireto mpikaroka ireto fa ny vanim-potoana no mety maha samy hafa azy.
Na eo aza ny voka-pikarohana isan-karazany, ny tsy azo lavina, samy ahitana valiha avokoa na eto Madagasikara, na any Filipina, na Indonezia, sns. Izay tany rehetra voalazana��ny tantara fa nalehana��ny Nosantara na ny Melayu-Polyneziana. Faharoa, misy fomba marobe iraisana��izy ireny. Anisana��izany ny fihinanana vary, ireo fomba sy asa arahina raha hamboly vary, trano manana zoro efatra , ny tranomanara, sns.
II- Ireo karazam-baliha misy
Ny endrika amam-bika sy ny akora nanaovana azy no ndeha hisokajiana ny karazam-baliha misy.
a- valiha toritena
Vita amina��ny volo na A�A�bambouA�A� ny vatana��ny valiha. Fahiny, iny hodina��ny volo iny ihany no nosikorina manaraka ny tsanganany hanjary tady. Notohanana voatavo monta ny andaniny roa mba hiainga tsy hipetaka intsony amina��ilay vatany. Avy amina��izay no nahazoana feo izay somary dombodombo. Io no A�A�razambena��ny valihaA�A� hitantsika ankehitriny. Mbola ahitana io karazam-baliha io eto Madagasikara, any Filipina, any Indenezia, sns.
b- Valiha misy ankodina
Teto Antananarivo no anisana��ny nipoirana��ity karazam-baliha ity, raha ny nambarana��ny tantara. Antony nahatonga izany ny fidirana��ny Anglisy teto Madagasikara niaraka tamina��ny zavamaneno toy ny piano. Nalaina��ny mpanamboatra valiha tahaka ny A�A�mA�caniqueA�A� ao amina��ny piano ka nasiany fanodinana azy ihany koa ny tadim-baliha (mbola tady na vahy) tamina��izany. Avy amina��iny zavatra iny (hazo somary nofisahina) no hanenjanana na hanaketrahana ilay tadim-baliha. Tsy niova kosa ny tohany satria mbola voatavo monta ihany.
d a�� Valiha mitady vy
Ity karazam-baliha ity no mbola tena maro mpampiasa ankehitriny. Volo ihany ny vatam-baliha fa efa vy (cable) kosa ny tadiny. Mampiasa fantsika hitazonana ny tendrony roa. Mikarantsana kokoa ny feona��ity karazam-baliha ity raha oharina amina��iretsy voalaza etsy aloha.
e- Valiha vata
Karazam-baliha lehibe ny valiha vata. Tsy mba vita amina��ny volo na bambou izy fa natao amina��ny hazo narafitra. Manana endrika tahaka ny vata rehefa vita ka izay no nahatonga azy ho valiha vata. Vy (tariby na cable) ihany ny tadiny, saingy noho io vatany somary lehibe io, zary mafy kokoa ny feony raha oharina amina��ny valiha vita amina��ny volo.
Misy miantso hoe A�A�marovanyA�A� ihany koa ny valiha vata. Efa zary lasa fahazarana mihitsy io,A� saingy raha ny marina, samihafa ny valiha vata sy ny marovany. Volo na bambou hafa mihitsy no anaovana ny marovany. Tsy mba volobe na volondrano izy io fa volo maniry an-tanety, hany ka matetika kokoa ny vaniny. Maneno ny valiha hatao aminy satria saika vaniny maromaro no tazana ao anatina��ny valiha iray. Na izany aza,A� heno ihany fa somary misy mitazona ilay feo raha ampitahaina amina��ny valiha vita amina��ny volobe na volondrano mahazatra hatramina��izay. Mavesatra kokoa ihany koa ny lanjana��ny valiha marovany satria matevina ilay volo.
III a�� Valiha Chromatique
Tsy nampidirina ao anatina��ny fanasokajiana tetsy aloha izy ity satria hafa tanteraka mihitsy. Tsy ny bikany rahateo no maha hafa azy fa ny feo hita ao anatiny. Manana feo marobe ny valiha A�A�chromariqueA�A� noho ny fisiana��ny antsasa-peo ao anatiny. Raha tsorina ny fanazavana,A� ity karazam-baliha ity no valiha ahitana hazo mainty raha oharina amina��ny piano. Manana ny naoty misy A�A�#A�A� (diezy)ny valiha A�A�chromatiqueA�A�. Ho ana��ny mpahay mozika, afaka miova A�A�tonalitA�A�A� eny ampitendrena ny mpitendry raha ity karazam-baliha ity no voafehiny tsara ny fitendrena azy.
Na tany amina��ny taona 1952 aza no efa nisy nanandrana nanao ny valiha A�A�chromatiqueA�A�, maro ihany ny tsy mankasitraka azy ity satria mbola tena sarotra ny mametraka ny rantsantanana ao aminy. Vokatra��izay, nanjary maromaro ny karazam-baliha A�A�chromatiqueA�A�. Samy miezaka ny manao ny azy ny mpikaroka tsirairay.
IV a�� Fampiasana ny valiha
a- Zavamaneno masina na manan-kasina no niantsoana ny valiha fahiny. Anisana��ny antony nahatonga izay, ny nampiasana azy tamina fombafomba sy zava-panahy samihafa. Iray amina��ireny ny fivavahana. Nitana izay maha manan-kasina azy izay ny vahiny rehefa niditra teto, hany ka na ny dikan-teny tao anatina��ny Baiboly aza mbola nitazonany izany.
b- Hira malefaka matetika no atao amina��ny valiha. A�A�KaloA�A� na A�A�KaluA�A� no iantsoana azy io. Na olona iray aza, afaka mikalo amim-baliha tsara. Tsy ahenoina feo manivaka fa itambesarana��ny angola sy filatro kosa. Matetika azaA� miteraka embona sy hanina ho ana��ireo izay mandre ny feony.
d- Mbola voaporofo amina��ity fomba iray ity ihany koa ny maha zavamaneno manana ny hasiny ny valiha. Fady tanteraka ny mampiditra am-paty ny valiha. Tena tsy azo atao izy io, araka ny fahalalana ananana��ny Malagasy. Marihina fa tsy finoanoam-poana, araka ny filazana��ny sasany azy ny toy izany fa fahalalana mihitsy, noho izany, fady ny manandrana azy.
e- Ankehitriny, maro ny mpitendry valiha, saingy mbola tena vitsy izany raha oharina amina mpitendry zavamaneno hafa toy ny gitara na piano. Antony lehibe niteraka io tranga ion y tsy fahalalana ity zavamaneno ity. Variana loatra any amina��ny zavamaneno sy ny gadona avy any ivelany ny Malagasy ka zara raha mahafantatra ny valiha.
f- Tsy nijanona ho kalo irery intsony ihany koa ny hira na karazan-kira sy gadona ahenoina ny feom-baliha fa efa maro. Anisana��ireny ny jazz, ny rap, sns. Misy aza mpandinika sasany milaza fa ny tahaka io no fomba iray hisintonana ny ankizy sy ny tanora hitia ny valihaA�! Maro ihany koa anefa ireo mpikaroka no mitsipaka ana��izany.
FanamarihanaA�: Ny lokanga no zavamaneno akaiky indrindra amina��ny valiha, hany ka zary fahazarana��ny Malagasy fahiny ny manaraka ny feom-baliha amina feon-dokanga.
V- Fahendrena malagasy fonosina��ny valiha
Eo amina��ny fanasokajiana ny zavamaneno maneran-tany, tafiditra ao anatina��ny zavamaneno misy tady ny valiha. Izany hoe,A� manana ny fiantraikany any amina��ny saina ny fahenoana matetika ny feony. Mampivelatra ny saina hahay handinika sy hamakafaka. Tsy mandona fo loatra izy raha oharina amina��ny feon-tsodina izay teny miteraka embona sy hanina ao anatina��ny fotoana fohy andrenesana azy.
Io izany no manamafy fa tsy olona��ny fo ihany ny Malagasy fa olona��ny saina ihany koa. Manamporofo izany ny nahaforonany ny ankifidy, ankamantatra, hainteny, angano, izay samy mitaky halalinan-tsaina tokoa. Noho izany, tsy iadian-kevitra fa lalin-tsaina ny Malagasy.
Ankoatra izay, nandraisana��ny Malagasy fahiny anatra ny fahitana ny toham-baliha, izay roa miavaka tsara. A�A�Toy ny toham-baliha ny fiainana ka ny avo manohana ny iva, ny iva manohatohana ny avo tsy hianjeraA�A�. Ilay fifamenoana eo amina��ny fiainana no tiany ambara eto. Toy izany ihany koa ny A�A�antitra mampiady kalo, ka ny antitra, antitra ihanyA�A�. Hoenti-milaza fa manana ny lanjany sy eo amina��ny fiainana ny fananana raiamandreny sy zoky. Ny A�A�Izaho valiha,A� ianao lokangaA�A�, manamafy izay fifampiankinana izay ihany koa. Na samy zavamaneno misy tady aza, samihafa ny fomba hitendrena ny valiha sy ny lokanga kanefa afaka miara-dia tsara. Izay ilay hoe A�A�harena ny fahasamihafanaA�A�.
Loharanom-baovao : Hary Razafindrakoto (Mpampianatra mpikaroka)
NanangonaA� : Velo M.
I- Ny valiha sy ny nipoirany Anisana��ny mifamatotra akaiky amina��ny tantarana��i Madagasikara sy ny Malagasy ny valiha. Fanontaniana anisana��ny goavana indrindra sy mila itadiavam-baliny ny hoeA�: A�A�avy any ivelany sa antsika Malagasy marina ny valihaA�?A�A�. Valim-pikarohana vitsivitsy no ndeha hamaliantsika io fanontaniana io. 1- Avy any ivelany ny valiha Mpikaroka maro no nilaza fa […]